Hjem > Uncategorized @so > Baadhitaanka hiv-ka
Waxaad iskaga qaadi kartaa dhakhtarkaaga joogtada ah/GP-yada, ururada qaarkood iyo xarumaha caafimaadka qaarkood ee cilmga galmada sida OlafiaClinic iyo Jinsiga iyo Bulshada (kuwa da`doodu ka yar 25 sano). In lagaa baaro HIV-ka waa bilaash markii aad ka mid tahay dadka kooxda xaalad khatar ah ku jira.
Waxaa jira laba nooc oo baadhitaan ah. Baadhitaan dhiiga ee caadiga ayaa qiyaastii qaadata 1. usbuuc inta aad jawaabta ka helayso. Dhawr urur ayaa sidoo kale bixiya baadhitaan deg deg ah, halkaas oo aad jawaabta ku helayso hal minit gudaheed. Kuwani waa, tusaale ahaan, Guddiga Caafimaadka iyo baadhitaanka Daqiiqadda.
Dadka badankood ee uu ku dhacay HIV-ku, waxa uu baadhitaanku uu soo saarayaa mudo dhan 2-6 toddobaad ka dib marka uu qofku qaado. Dadka in yar oo ka mid ah, waxay qaadan kartaa wakhti yar oo ka dheer, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad is tijaabiso kantaroolka 12 toddobaad kadib markaad ku jirtay xaalad cudurka.